Industrial milina fanasan-damba, milina fanasan-damba Extractor - Taifeng
Automatic tilting milina fanasan-damba Extractor
Automatic milina fanasan-damba Extractor
Barrier milina fanasan-damba Extractor
Lamba Famahanana Machine
Gas mafana namaoka Machine
High-paharitry fahombiazana Machine
Industrial milina fanasan-damba
lamba firakotra Centrifuge
Lamba famaohana mbola hanohon Machine
Omeo Avo izahay Qualityequipment
milina mandeha ho azy ironing
milina fanasan-damba mandeha ho azy extractor
Jiangsu Taifeng milina Manufacturing Co., LTD. dia fanasana lehibe mpanamboatra fitaovana amin'ny voasoratra anarana renivohitry ny 45,2 tapitrisa Yuan. Ny orinasa dia mpikambana ao amin'ny Fahazavana Industry milina Association, ary no misy Taizhou City, Jiangsu Province - ny tanàna niaviany ny Filoha Hu Jintao. Ny orinasa no misy ao amin'ny Reniranon'i Yangtze Delta Region. Ny orinasa dia manokana amin'ny famokarana fitaovana fanasan-indostrialy, dia ny safidy tsara ho an'ny trano fandraisam-bahiny marika, hopitaly, trano fisakafoanana, lamba, akanjo sy ny fanasan-indostria.
Tompon'andraikitra Shina, tompon'andraikitra Factory
Koa satria ny vaovao nitranga tao Shina Coronavirus amin'ny faran'ny tamin'ny taon-dasa, izay lasa valan'aretina fiantraikany lehibe indrindra Shina tanàna Wuhan.In mba hiady amin'ny virosy rehetra isika Shinoa manaraka ny fitarihan'ny governemanta ary ankehitriny isika dia manao izay fara herintsika mba miezaka ny handresy izany. Azafady aza manahy Abou ...
Mafana Arahabaina Jiangsu Taifeng amin'ny nanatevin-daharana ny CCCC
Tamin'ny 25 Septambra, Jiangsu Taifeng nikarakara mpiasa rehetra mba handeha ho any Zhejiang.
Vao maraina, ny masoandro mamirapiratra, dia Niainga eo amin'ny diany ho any Zhejiang. Ny olon-drehetra dia nanana fotoana tsy fahita firy miaraka mba handeha miaraka, ka nampiseho fa tena faly izy ireo, ary nihomehy teny an-dalana. Ny mpitari-dalana tsara tarehy ramatoa nanome fanazavana tena tsara hanaovana ilay dia mahaliana kokoa. ...
Mariho Company fanovana anarana
Noho ny fampandrosoana zavatra ilaina, Taizhou Taonjato Taifeng Mechanical sy elektrika Fitaovana Manufacturing Co., Ltd. dia niova ho Jiangsu Taifeng milina Manufacturing Co., Ltd. tamin'ny 1 Jolay 2019, miaraka amin'ny fankatoavan'ny Rehefa nandinika ny Raharaham-panjakana sy ny Fankatoavana Biraon'ny Taizhou fanafody Avo -te ...
Beijing ONIVERSITEN'I Lahatsoratra SY FIFANDRAISAN-DAVITRA
302 hopitaly miaramila Shina
Nanjing FOREING LANGUAGE SEKOLY
Jiangsu TAIZHOU OLONA NY Hopitaly
No.599 Xiangtai Road, Economic Development Zone, Taizhou, Jiangsu Province, Sina